Kedu ihe kpatara 2.0T ji dị iche, ọ dị iche na 100 horsepower？ Kedu ihe dị iche Kedu ihe kpatara 2.0T ji dị iche, ọ dị iche na 100 horsepower？ Kedu ihe dị iche - LFOTPP
Kedu ihe kpatara 2.0T ji dị iche, ọ dị iche na 100 horsepower？ Kedu ihe dị iche n'etiti ike dị elu na ala?
N’oge ugbu a, ọtụtụ ndị na-arụzi ụgbọala na-ebu ibu ga-abụ nnukwu nsogbu banyere injin ahụ mgbe ha webatara ụdị ọhụrụ
Iji maa atụ, otu injin ga-ebido ụdị abụọ dị iche na nke ike dị ala na nke dị elu.
Yabụ enwere ọdịiche ọ bụla dị mkpa n'etiti ụdị ike ndị a dị iche iche? Completely nwere nsogbu kpamkpam na mmemme kọmputa? Taa, ka anyị kwuo maka ọdịiche dị n’etiti igwe na - arụ ike dị ala.
Kedu ihe dị iche n'etiti otu igwe dị elu na ike dị ala?
Ihe kpatara ndi n’ere ahia kere ekeji otu igwe ihe abuo abuo nke ike, na mgbakwunye na ime ka ndiiche di n’etiti di elu na ndi di ala, ihe ozo bu izoputa ego.
Nke a nwere ike ịchekwa ọtụtụ nyocha na mmepe, ọnụahịa mmepụta!
Yabụ, iji otu igwe ahụ na-enye arụpụta dị iche iche abụrụla ihe kacha mkpa taa.
Enwere ike ikwu na tupu mgbe ahụ, otu ụdị ahụ dị elu na nke ike dị ala nwere ọdịiche ngwaike, dị ka BMW 3 Series nke ọgbọ F30.
Agbanyeghị na 320i na 328i ji otu N20 2.0T engine, ụdị a dị elu dị iche na nke dị ala n'ụdị dị ala na mkpanaka njikọ na piston.
Ngwakọta piston nke 320i bụ 11: 1, ebe mkpokọta mkpakọ nke 328i bụ 10: 1. Ọ dị mkpa ịmara na oke mkpakọ dị iche iche na-emetụta arụmọrụ ọkụ dị iche iche, yabụ enwere ọtụtụ ọdịiche na ike nke ụgbọ ala.
Agbanyeghị, 2018 BMW 320i na 330i taa, ewepu na programmụ kọmputa, enweghị ọdịiche dị na ngwaike. Ma ugbu a ọtụtụ ụdị dị elu na nke ala dị ala enweghị ọdịiche dị mkpa na ngwaike injin.
Ihe kpatara ihe dị elu na ala ga-eme dabere na mgbanwe dị iche iche nke onye nrụpụta na kọmputa ECU nke ụgbọ ala yana ihe dị iche na mgbanye ọkụ.
Nwere ike brusled ike obere ike?
Na ntụle, ọ bụrụ n'ụgbọ gị adịghị iche n'ụdị dị elu na ngwaike injin, ị nwere ike nweta ike dị elu site na ịzọcha ECU. Ma tinyekwa uche na isi ihe ndị ahụ.
Nke mbu, nkwalite onwe onye nke ike ugbo ala nwere ike mebie iwu ma o nwekwara ike bute umu anwuru nke na-adighi nma. Storeslọ ahịa 4S ga-ajụ. Vehiclegbọala nke mebiworo kọmputa ECU, ọ bụrụ na enwere nsogbu, ụlọ ahịa 4S nwere ike jụ inye akwụkwọ ikike a.
Nke abuo, ogo nke mmanu oku kariri ike nke ugbo ala. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gbakwunye 92 # mmanụ, ị nwere ike itinye 95 # mmanụ mmanụ mgbe ịpusasịrị kọmputa ECU. N'ezie, enwere ike ịhazi ọtụtụ mmemme kọmputa n’oge a maka mmanụ ala dị ala dịka ọnọdụ ụgbọ ala gị. Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, a na-atụ aro ka ịhọrọ mmanụ ọkụ dị elu iji zere ịkụ ọkpọ.
Nke atọ, a na-agbachasị agbachasị agbachapụghị agbasi ike n'ike, ma ka ike ụgbọ ala na-abawanye, o nwere ike ibute injin ọkụ ọkụ ogologo oge. N'ọnọdụ dị oke njọ, mbibi nwere ike ịdakwasị akụkụ ahụ nke injin ahụ.
Nchịkọta: Ọ bụ ezie na ụdị ike dị ala nke ECU brunel nlereanya ahụ nwere ike imezi ikike ahụ, mana enweghị enyemaka inye aka na ngwaike ahụ, ọ baghị uru. Ya mere, a na-atụ aro na ọ bụrụ na ị na-agbaso ike nke ụgbọ ahụ, iji mee ka akụkụ niile kwụsie ike, ọ bụ karịa nweere onwe gị ịzụta ụdị ahụ dị elu ozugbo.
Pịa ma zụọ ahịa ngwa ahịa eji ebu ahịa